Famokarana herinaratra : Hovelomina ny CTA II Ambohimanambola -
AccueilSongandinaFamokarana herinaratra : Hovelomina ny CTA II Ambohimanambola
Famokarana herinaratra : Hovelomina ny CTA II Ambohimanambola
20/04/2018 admintriatra Songandina 0
Mazava. Ny hanala ny fahasahiranan’ny mponina eto an-drenivohitra amin’ny tsy fahatomombanan’ny herinaratra no tanjon’ny Fanjakana. Noho izay indrindra, nidina ifotony teny amin’ny tobim-pamokarana herinaratra eny Ambohimanambola, omaly, ny minisitry ny Rano sy ny Angovo ary ny Akoran’afo (MEEH), Lantoniaina Rasoloelison, niaraka tamin’ny tale jeneralin’ny orinasa Jirama, Jaomiary Olivier.
Tamin’izany indrindra no nahafantarana fa mbola tsy nisy nikitika sy nanamboatra mihitsy ny Central Thermique Ambohimanambola II na CTA II nandritra ny fotoana naharitra. Noho izay indrindra, dia nisy ny fifanaovan-tsonia teo amin’ny orinasa tiorka Aksaf Power sy ny orinasa Jirama amin’ny fanamboarana sy famelomana indray ny CTA II hanampiana ny famokarana herinaratra ho an’ny tambazotran’Antananarivo.
Voarakitry ny fifanarahana kosa, horaisin’ny orinasa Aksaf Power ny fanamboarana sy famelomana ny milina goavana ao amin’ny CTA II. Ny volana aogositra izao kosa no tontosa sy hifarana ny fanamboarana, ary avy hatrany dia mihodina mamokatra herinarata ny milina. Marihina fa mamokatra herinaratra fanampiny 26 MW ity milina ity. Voalaza ihany koa fa mandritra ny dimy taona no hitantanan’ny Aksaf Power ny CTA II ary aorian’izay dia miverina ho fananana madiodion’ny orinasa Jirama izany. Raha ny fanazavana mantsy, tsy manam-bola hanarenana sy hamerenana ny CTA II ny orinasa Jirama ka niafara tamin’ny fifanarahana taorian’ny tolo-bidy nataon’ny Fanjakana, ka ny Aksaf Power no nahazo izany. Izany hoe, ny Aksaf Power no hitantanana ity tobi-pamokarana ity ary ao anatin’ny dimy taona no hamerenany ny volany tamin’ny fanamboarana. Aorian’izay kosa vao miverina ho fananan’ny Jirama ny CTA II.
Na izany aza anefa, diz mbola manilika trosa amin’ny Fanjakana ny Jirama tamin’ny nividianana ilay milina tamin’ny fotoan’androny, izay mitentina 15 tapitrisa Dolara. Marihina, araka ny voalaza fa mbola mivarotra herinaratra amin’ny fatiantoka ny orinasa Jirama amin’izao fotoana izao.
Tuttoservizi.altervista.org dans L’incendie du Rova de Manjakamiadana, 20 ans plus tôt
123Movies dans Tsy nahomby teto Antananarivo-HAMBOLY KORONTANA ANY MAHAJANGA NY MLE
123Movies dans Kepel: «L’État islamique vise l’installation du califat sur les ruines de l’Europe»
click here dans Fikambanana masoandro mody-NAHAZO FANAMPIANA AVY AMIN’NY VADIN’NY FILOHA
accredited online ekg course dans Kepel: «L’État islamique vise l’installation du califat sur les ruines de l’Europe»
Fihaonamben’ny BRICS : Nahazo fanasana ny filoha Hery Rajaonarimampianina
Filoha Rajaonarimampianina : Niray fo tamin’ireo traboina
Tuttoservizi.altervista.org: I visited multiple websites but the audio quality for audio songs present at this site is truly wonderful.
123Movies: Title [...]always a huge fan of linking to bloggers that I enjoy but do not get lots of link…
123Movies: Title [...]Wonderful story, reckoned we could combine a couple of unrelated information, nevertheless really really worth taking a appear,…